Seddax haween ah oo ku dhejinayey derbiyada sawiro aflagaado ku ah Nabiga NNKH ayaa la xiray… – Hagaag.com
Seddax haween ah oo ku dhejinayey derbiyada sawiro aflagaado ku ah Nabiga NNKH ayaa la xiray…
Maamulka magaalada Toulouse, koonfur galbeed ee dalka Faransiiska ayaa xiray 3 haween ah oo ay ku dhajinayeen sawiro aflagaado ku ah Nabiga suuban ee Muxamed naxariis iyo nabad galyo korkiisa ha ahaatee, wadooyinka magaalada fiidnimadii Isniinta, iyadoo ay jirto dareen ku aadan dadka wadanka ka dib dilkii macalin uu soo bandhigay sawiro kuwan la mid ah.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Faransiiska – oo ku tilmaamtay haweenku inay yihiin kuwa u ololeeya arrimaha haweenka – mid walba waxay wadatay baaldi ay ka buuxaan xabag, buraash iyo boqollaal waraaqo ah oo ay ku daabacan yihiin sawiradan, waxayna bilaabeen inay ku dhajiyaan waddooyinka magaalada iyagoo ujeedkoodu aheyd “inay ku qarqiyaan magaalada Toulouse” iyagoo wata kun caricatures, waxayna sheegeen inay xaqiijinayaan “xuquuqdooda cayda.” Sida ay yiraahdaan.
Ficilladooda waxaa si dhakhso leh u qabsaday dareenka dadka jidka marayay, qaar ka mid ah ayaa joojiyay haweenka oo waydiiyey sababta ay ugu lifaaqeen sawirradan, halka kuwa kalena ay weerareen, laakiin waxay sii wadeen inay si deg deg ah ugu dhejiyaan sawirada.
“Waa inaan si dhakhso ah ku dhammeeynaa maxaa yeelay waxa aan qabaneyno ayaa ugu dambeeynta ay tahay arrin khatar badan leh, halkanna uma joogno inaan ku qabanno shir jaraa’id,” ayay mid ka mid ah haweenkan u sheegtay AFP, iyadoo doorbideysa inaan la daabicin magaceeda.
Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd nus saac uun markay arrinka ogaadeen booliska iyagoo ku soo xiray saldhigga booliska iyagoo lagu eedeeyay “in ay dhejiyeen waraaqo sharci darro ah,” gaar ahaan goobaha qadiimiga ah.
Dhacdadan ayaa timid saacado kadib markii Wasiirka Arimaha Gudaha Gerard Darmanan uu ku dhawaaqay in uu amar ku bixiyay in la xiro Masaajid ku yaal xaafadaha magaalada Paris, kadib markii uu boggiisa la wadaagay muuqaal video ah oo uu ku cambaareynayo muuqaalka aflagaadada ah ee lagu aflagaadeynayo Rasuulka Islaamka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee macalinkii la gowracay Jimcihii.
Shalay, Isniinta, mas’uuliyiintu waxay bilaabeen olole ka dhan ah shaqsiyaadka iyo ururada Islaamiga ah, waxayna wacad ku mareen inay qaadayaan “dagaal ka dhan ah cadawga Jamhuuriyada,” sida ay hadalka u dhigeen.
Wasiirka Arimaha Gudaha ayaa mar kale ku celiyay in howlgalada lagu bartilmaameedsanayo daraasiin shaqsiyaad ah oo aan daruuri aheyn in ay ku lug leeyihiin baaritaanka dilkii macalinka taariikhda Samuel Patty, laakiin ujeedkoodu tahay in la gudbiyo fariin ah “ma ogolaaneyno cadawga Jamhuuriyada inay nastaan ​​hal daqiiqo.”
Galabnimadii Jimcahii, Patty, 47, ayaa lagu dilay meel u dhow iskuul uu ka dhigayey taariikhda iyo juqraafiga xaafad deggan oo ku taal Conflans-Saint-Honorine, xaafadaha galbeedka ka xiga Paris.
Booliisku waxay ku sheegeen gacan ku dhiiglaha, 18 jir qaxooti reer Chechen ah oo lagu magacaabo Abdullah Anzurov.